Nanasitrana olona maro i Jesoa...
Alarobia 04 desambra 2019 - Herinandro voalohany amin'ny Fiavian'ny Tompo
Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Matio 15, 29-37.
Tongava ry Tompo, ary aza ela, vahao ny fatoran'ny vahokanao.
Ny zaza manaikitraikitra hoho
Tsy dia mahataitra loatra ireo ray aman-dreny niteraka sy ireo mpanabe ny fahitana ny zanany na ny zaza iray manaikitraikitra hoho, kanefa dia misy fiantraikany any amin'ny fiainany manontolo, any maha izy azy mihitsy izany. Resahana io lohahevitra izao mba hahafantaran'ny mpihaino fa misy antony mahatonga io tranga io.
Horohorontany tany Albanie
Nivavaka sy naneho ny fiombonam-pony amin'i Albanie ny Papa taorian'ilay horohorontany nahazo an'io firenena io, ny alin'ny alatsianiny hifoha talata lasa teo.
Pejy 109 amin'ny 111